ကနျြးမာရေး Archives - Myanamr Express
မာလကာရွက်မှာ ဆံနွယ်တွေ ပိုမိုသန်မာစေဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗင်တာမင် B ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် မွှေးညှင်းပေါက်တွေဖြစ်တဲ့ Hair Follicle တွေ နဲ့ ဆံပင်ရဲ့ အမြစ်တွေကို ပိုမိုသန်မာစေပါတယ်။… Read More မာလကာရွက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
— Lifestyle, ကနျြးမာရေး —
အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါ… Read More အသည်းကြီးလျှင် ဖရဲသီးစားပါ
ဆီးချို သမားအနာဖြစ်လျှင် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်
ဆီးချို သမားအနာဖြစ်လျှင် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်… Read More ဆီးချို သမားအနာဖြစ်လျှင် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်
လူ တစ်ယောက်… သေပြီး ရင် ဘာတွေ လှူ လို့ရလဲဆိုတာ အပြည့် အစုံ သိထားရန်….
… Read More လူ တစ်ယောက်… သေပြီး ရင် ဘာတွေ လှူ လို့ရလဲဆိုတာ အပြည့် အစုံ သိထားရန်….
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားဓာတ် လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)မျိုး
အသားဓာတ် ချို့တဲ့မှုမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ဖို့ သင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အသားဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ြ
ပပေးလိုက်ပါတယ်နော်…… Read More သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားဓာတ် လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)မျိုး
အခက်မသင့်ရင် အဆိပ်သင့်ပြီး လူကိုအန္တရာယ်ပေးစေနိုင်တဲ့ ငါးရှဉ့်စားသုံးခြင်းအကြောင်း… Read More အခက်မသင့်ရင် အဆိပ်သင့်ပြီး လူကိုအန္တရာယ်ပေးစေနိုင်တဲ့ ငါးရှဉ့်စားသုံးခြင်းအကြောင်း